Waa maxay faraqa Solar PV Cable PV1-F iyo H1Z2Z2-K istaandarka?
Fiilooyinkayaga sawir-qaadista (PV) waxaa loogu talagalay isku-xidhka qalabka korontada ee ku jira nidaamyada tamarta la cusboonaysiin karo ee loo yaqaan 'photovoltaic system' sida qorraxda qorraxda ee beeraha tamarta qorraxda. Fiilooyinka qoraxda ku shaqeeya waxay ku habboon yihiin rakibaadda go'an, gudaha iyo dibaddaba, iyo gudaha marinnada ama nidaamyada, laakiin kuma habboonaan codsiyada aaska.
Waxaa laga soo saaray sicirkii ugu dambeeyay ee yurubiyanka ah EN 50618 iyo magaca la waafajiyay ee H1Z2Z2-K, Solar DC Cable waa fiilooyin cayiman oo loogu talagalay in lagu isticmaalo nidaamyada Photovoltaic (PV), iyo gaar ahaan kuwa lagu rakibo dhinaca Direct Current (DC) oo leh magac magac ah DC. danab gaadhaya ilaa 1.5kV inta udhaxeysa qalabka korontada ku shaqeeya iyo sidoo kale inta udhaxeysa baaraha iyo dhulka, oo aan ka badneyn 1800V. EN 50618 waxay ubaahantahay fiilooyinku inay noqdaan qiiq hoose eber halogen iyo inay noqdaan hago dabacsan oo dahaar leh isla markaana leh hal xuddun iyo iskuxidhka iskutallaabta iyo galkeeda. Fiilooyinka waxaa looga baahan yahay in lagu tijaabiyo danab dhan 11kV AC 50Hz waxayna leeyihiin heer kul kulma oo ah -40oC ilaa + 90oC. H1Z2Z2-K wuxuu badalay fiiladii hore ee TÜV ee la ansaxiyay ee PV1-F.
Isku-darka loo isticmaalay dahaarka siligga qorraxda iyo bannaanka waa halogen iskutallaab la'aan ah, sidaa darteed tixraacyada fiilooyinkaas waxaa ka mid ah "fiilooyin iskutallaabta ku xiran tamarta qorraxda". Heerka sare ee EN50618 wuxuu leeyahay darbi ka sii dhumuc weyn nooca PV1-F.
Sida keydka TVV PV1-F, fiilada EN50618 waxay ka faa'iideysaneysaa laba-ku-xirid oo bixisa nabadgelyo. Qalabaynta qiiqa 'Low Seroke Zero Halogen (LSZH)' iyo sheathing waxay ka dhigeysaa iyaga kuwo ku habboon in lagu isticmaalo bey'adaha halka qiiqa wasakhda ahi khatar gelin karo nolosha aadanaha haddii dab dhaco.
XIRIIRKA TILMAANTA QALABKA IYO DHAQAALAHA
Faahfaahin buuxda oo farsamo fadlan tixraac xaashida xogta ama la hadal kooxdayada farsamada wixii talo dheeraad ah. Qalabka solarka solarka ayaa sidoo kale la heli karaa.
Fiilooyinkaan PV waa ozone-adkaysi sida ku cad BS EN 50396, UV u adkaysta sida ku cad HD605 / A1, waxaana lagu tijaabiyay adkeysi iyadoo la raacayo EN 60216. Waqti xaddidan, T approvedV la ansixiyay PV1-F sawir-qaadista sawir-qaadashada ayaa wali laga heli karaa keydka .
Tiro badan oo fiilooyin ah oo loogu talagalay rakibidda dib-u-cusbooneysiinta ayaa sidoo kale la heli karaa oo ay ku jiraan marawaxadaha dabaysha ee badda iyo kuwa badda, biyo-soo-saarka korontada iyo bayoolajiga ayaa sidoo kale la heli karaa.
Waqtiga boostada: Nofeembar-29-2020